5 Shimbiraha Xanaaqsan ayaa ku ciyaaraya noocyo fiisigis weyn leh | Androidsis
Fiisigiska walxaha ee ciyaarta fiidiyowga maanta ayaa oggolaanaya ha la qoslo xilliyadaas kala sooc la'aanta ah ee ay guddi ku dul dhacdo shimbir yar dusheeda si markaa, markay rogrogto, ay u dhammaato inay isku dhacaan mid kale oo sababi doona in dogobku dhaqaaqo, taas oo ku timaadda xilli ku habboon, ugu dambayntiina hoos u dhigta dhismayaasha alwaaxda oo dhan. Intii aan ku jirnay howshaas oo dhan waxaan la yaabnay anaga oo fiirinayna shaashadda si aan ugu dambeyntii ugu qaylinno guusha la gaadhay iyo inaan xirfad u leenahay inaan heerkaas ka gudubno. Mid ka mid ah cayaaraha muujinaya fiisikiska walxaha ayaa ah Shimbiraha Xanaaqsan taas oo u oggolaatay inay u kacdo xagga sare ee soo dejinta adduunka oo dhan.
Marka waxaan ka wada hadli doonnaa 5 video game oo loogu talagalay Android oo adeegsada «Nuqul» ciyaarta shimbiraha careysan laakiin leh mawduucyo kale oo aan caadi ahayn oo xiiso leh. Markaa u soco diyaarinta guushaas inqilaabka si aad uga gudubto dhammaan heerarka adiga kugu sugaya cayaarahan bilaashka ah xilliga xagaaga sida Jimcaha oo kale ayaa ku habboon in la naco cayaaraha qaabka shimbiraha. Aynu u tagno fiisigiska walxaha si aan u aragno haddii ay u dhaqmayso iyo sidoo kale Birds Angry oo uu qoray Rovio oo ka dhigtay mid ka mid ah istuudiyaha ciyaarta fiidiyowga ugu caansan ee qalabka moobiilka.
1 Zombies doqon ah
2 higsiga King
5 Geesi Geesi
Zombies doqon ah
Horaan uga hadlay ciyaartan fiidiyaha waqtigaas waxayna iila muuqatay ciyaar iska caadi ah taas oo ay ahayd inaan ka takhalusno dhammaan zombi-yadaas naga horreeya. Waxaan haysan doonnaa hub fara badan oo kala duwan si aan uga takhalusno dhammaan zombiesyadaas oo sugi doona inaan ka takhalusno.
Waxaad u dooran doontaa dariiqa toogashada si wanaagsan si aad u awoodid hel dhibcaha ugu sarreeya ee suurtogalka ah oo sidaas samee xoogaa iskudhaf ah oo gaar ah oo ah meesha loo yaqaan 'chicha of this video game' oo aad u xiiso badan. Hubkooda sidoo kale waxaa kujira waxa khaas ah, kaliya maahan saameynta ay sameeyeen, laakiin sidoo kale magacooda darteed, sida ku dhacda gantaalka ayeeyo. Waxaad ku haysataa bilaash dukaanka ciyaarta oo leh in kabadan 120 heerar.
Nacaska jidkiisu Zombies 3
Ciyaar kuwa leh jilayaasha waalan oo ay tahay inaad ku badbaadiso gabadha boqorka ah ee u xidhan masduulaa habaaran. Ciyaar fiidiyoow ah oo leh shey fiisigis ah oo aad ku haysato kataloog waxaadna u baahan doontaa inaad saxdo si aad uga takhalusto cadawgaas. Dhagaxyada ka sokow, waxaad dooran kartaa waxyaabo sixir oo kala duwan si aad u xoojiso garaacyadaada.
Si ka duwan Shimbiraha careysan, ee King Catapult waxaa lagu abuuray 3D kuu ogolaanaya inaad sifiican u ilaaliso goobta dagaalka si aad si fiican u doorato darbiyadaada. Ciyaar kale oo fiidiyoow ah oo qalbi furan oo qaylada ama qosolku inta badan noqoto wax iska caadi ah, markaa la qabsow.
Developer: Sixiroole Fiirso
Waxaan kudhowaad dhihi karnaa waxaan wajaheynaa Shimbiro careysan bambooyin iyo dad halkii laga heli lahaa shimbiraha iyo doofaarrada, waana sidaas in la bixiyo in ka badan 10 adduunyo kala duwan iyo boqollaal heerar. Ciyaar madadaalo ah oo la yiraahdo Fragger oo aad khabiir ku noqon doontid tuurista bambooyin si aad u baabi'iso cadawga oo dhan.
Waa inaad ka taxaddartaa markaad garaacayso, tan iyo cadaawayaashaas ma istaagi doonaan waxayna isku dayi doonaan inay ku dhuuntaan meelaha ay adagtahay in laga soo baxo. Naxariistu waxay tahay inaanan heli karin Fragger 2 kaas oo si gaar ah loogu talagalay macruufka iyadoo la adeegsanayo sawirada la hagaajiyay iyo waxyaabo badan.
Geesi aad u doofaarro badan oo ku dhowaad loogu yeero Rambo himiladiisuna noqon doonto badbaadi saaxiibkiisa ugu fiican, Bacon. Waxaan horeyba u iri bilowga liistadan inaad qosol ku lahaan doontid ciyaartan, maxaa yeelay badankood waxay leeyihiin meel kaftan ah oo iska cad. Halkaan ma lahaan doontid xoqdo ama katarabboolayaal, laakiin waxaa jira fiisikis walxaha lagu raaxeysto badan.
Waxaad haysataa hub aad u isticmaasho sida ay yihiin bastoolado, fallaaro ama qoryaha darandooriga u dhaca si looga takhaluso cadawgaas qaab doofaarro yaryar. Waxay leedahay in kabadan 200 oo hawlgal mid walibana wuxuu leeyahay xujo u gaar ah oo leh fiisikiskeeda sidaa darteed waxaad isku dayi kartaa inaad waqti fiican hesho.
Kulankaan wuxuu raacayaa Catapult King bilicsanaanta leh qarniyadii dhexe, waxayna bixisaa khibrad qof-koowaad ah oo ka duwan kuwa kale. Waxaad u baahan doontaa inaad doorato dhagaxyo, bambooyin iyo dabka si aad u baabi'iso dhismayaasha cadowga xaglo kala duwan. Ciyaar 3D ah oo ay tahay inaad maamusho si aad u awoodo inaad bilowdo tallaalka ugu fiican ee suurtogalka ah.
Waxaa jira boqolaal heerar oo la heli karo oo aad xitaa awoodi karto ka saar jilayaasha saaxiibtinimada leh haddii aadan ka taxaddarin tallaalkaaga. Ciyaar fiidiyoow ah oo leh tayo badan oo aad adigu bilaash ku haysatid, sida kuwa kale, oo ka socda Google Play Store.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » 5 Ciyaaraha fiidiyowga ee noocyada shimbiraha ah ee cilmiga fiisigiska walxaha muhiimka u ah